Vanhu Gumi Vakakuvara Mukubaya Rampage PaTokyo Commuter Chitima
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Vanhu Gumi Vakakuvara Mukubaya Rampage PaTokyo Commuter Chitima
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Japan Kuputsa Nhau • nhau • Rail Kufamba • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Chiitiko ichi chakonzeresa kukanganisa kukuru panjanji yeOdakyu, nemabasa akamiswa kumusoro uye pasi mutsetse kubva kuzviteshi zviviri zvakakanganiswa.
Mumwe murume ane banga akaenda pakurova kwakabaya chitima cheTokyo.
Kurwiswa uku kwakaitika kunzira yeOdakyu Electric Railway kunonoka neChishanu.
Mumwe weavo vakakuvadzwa zvakaipisisa mushure mekubayiwa nebanga kakawanda.
Mumwe murume ari mumaoko emapurisa manheru ano mushure mekuenda pa kubaya spree paTokyo Odakyu Electric Railway mutsara commuter chitima.
Vanenge vanhu gumi vakakuvadzwa pakurwiswa kwakaitika mukupera kweChishanu mu Tokyoyekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweguta reSetagaya.
Nepo mishumo yekutanga ichiratidza kuti vanhu vana vakakuvara pakurwiswa uku, huwandu hwacho hwakazowedzera kusvika kune gumi vakaurayiwa, sekureva kwenhau dzemuno dzichitaura nezvebazi remoto reSetagaya.
Dhipatimendi reMoto reTokyo rakati vapfumbamwe vevane gumi vakakuvara vafambi vakaendeswa kuzvipatara zviri padyo, nepo wechi10 vachikwanisa kufamba vachienda. Vese avo vakakuvara vaiziva, vakuru vebazi remoto vakati.
Mumwe wevakakuvadzwa akakuvara zvakaipisisa mushure mekubayiwa nebanga kakawanda, vezvenhau veko vakataura vachidana kwavabva mapurisa.
Pakarepo mushure mechiitiko ichi, chitima chakamira pakati pezviteshi zviviri, musungwa achinzi akasvetuka ndokutiza netsoka. Hazvina kunyatso kujeka kuti ndiani adhonze mabhureki ezvitima.
Mupomeri akatiza chitima achisiya banga rake pamwe nenharembozha.
Chiitiko ichi chakakonzera kutsvaga, pamwe nemurume anofungidzirwa, mumakore ake makumi maviri, apedzisira asungwa nemapurisa mushure mekunge azvitengera muchitoro chiri padyo, achiudza maneja kuti ndiye aikonzeresa kurwiswa uku. Zvinangwa zvemunhu akarwisa hazvisati zvazivikanwa.
Mhirizhonga ine chisimba isingawanzoitika muJapan, uye kurwiswa kunouya pamwe neguta guru pakuchenjerera kwekuchengetedza sezvo ichitamba Mitambo yeOlympic.
Gunyana 20, 2021 pa 13: 39
Gunyana 20, 2021 pa 13: 25